कथा – नाङ्गो तस्बिर (१८+ माथिका लागि मात्र)
2018-04-25 | तीताेपाटी डट कम
“कस्तो पोल्यो!” उसले रुन्चे स्वरमा बोलि।
“केके पोल्यो नि! घाउ नै पार्दिनु भयो कि क्याहो?” ऊ म संग बच्चा झैँ टाँसिदैं पिडा सुनाइ।
मैले उसको सिरलाइ मेरो छातिमा राखेर सानो स्वरमा बोलेँ “अघि नै भन्न पर्दैन त? पहिलो पटक भएर त्यस्तो भएको होला। एकछिनमा ठिक हुन्छ।”
मेरो सान्त्वना पाएर सायद ऊ ढुक्क भइ। केहि बोलिन। मलाइ जोडले पकडेर मेरो छातिमा टाँसिइ रहि। मैले एकपटक उसको शरिर नियालेँ। उसको सर्वाङ्ग नाङ्गो शरिर मेरो शरिरमा टाँंसिएको थियो। उसको एउटा खुट्टा मेरा खुट्टाको बिचमा थियो। उसको कम्मर मेरो कम्मरको दाइने भागमा जोडिएको थियो। उसका सेता अनि मुलायम तिग्राहरु मेरो तिग्रामा खप्टिएका थिए। उसको कोमल छाती मेरो छातिको छेउमा टाँसिएको थियो। भर्खरै फक्रीएको उसको एउटा कलिलो स्तन मेरो छातिमा अडेस लागेर बिश्राम गर्दै थियो, अनि अर्को तल कतै लुकेको थियो। उसका नजरहरुले घरिघरी मेरो अनुहारमा हेर्थे अनि फेरि लजाए झैँ गरेर झुक्थे।
केहिबेरको मौनता पछि मैले उसको चिउँडोमा हात राखेर उसका नजर म तिर मोड्दै बोलेँ “धेरै पोल्यो डल्ली?”
“पोल्यो त अनि!” ऊ लाडिइ।
“पोल्यो मात्रै? मज्जा भएन?” मैले मुस्कुराउँदै जिस्काइँदिएँ।
“खै!” ऊ लजाएर खुम्चिइ।
“साँच्चै भनन के! मज्जा नै भएन?” मैले फेरि प्रश्न गरेँ।
“भयो नि! तर अहिले धेरै पोल्यो के।” ऊ अझै जोडले म संग टाँसिदै बोलि।
“पहिलो पटक भएर हो। पछीपछि यस्तो हुँदैन।”
“हजुरलाइ कसरी थाहा भयो नि पछि चाही पोल्दैन भनेर? उसले लगत्तै प्रश्न गरि।
“अनि सधैँ पोल्छ त? थाहा भैहाल्छ नि यत्ती कुरा।”
“कसरि थाहा हुन्छ तपाइँलाइ?”
“सुनेर थाहा हुन्छ नि।”
“सुनेर हो कि? अनुभवले हो?” उसले हिचकिचाउँदै बोलि।
“के भनेको हौ त्यस्तो?” म रिसाइदिएँ। उसका शरिरमा भएका मेरा हातलाइ हटाएर ओछ्यानमा राखेँ। उसले पुलुक्क मेरो अनुहारमा हेरि। उसको अनुहारको चमक हरायो।
“सरि! जिस्केको पो त।” उसले रुन्चे स्वरमा माफी मागी।
“मेरो बिश्वास् लाग्दैन?” मैले गह्रुङ्गो स्वरमा बोलेँ।
“लाग्छ के!” उसले मेरो गालामा ओठ जोड्दै बोलि।
“अनि किन त्यस्तो भन्या त?”
“यस्सै जिस्केको पो त। यतिमा रिसाउन पर्छ त?” यति बोल्दै उसले उसका ओठहरु मेरा ओठ नजिकै ल्याइ।
“यसरी नि जिस्कन्छन् …….!” मैले बोलि नसक्दै उसले मेरा ओठमा उसका ओठ खप्टिदिइ। मैले पनि उसालाइ माफ गरिदिएँ। ऊ मेरा ओठमा चुम्बन गर्दै
मेरो माथी आइ। उसका दुबै स्तनहरु मेरा छातिमा टाँसिए। मैले मेरा हातहरु उसको कम्मरमा पुर्याएँ। उसले उसका दुबै हातले मेरो गालामा पकडेर जोडजोडले मेरा ओठमा चुम्बन गरिरही। केहिबेर पछि मैले बिस्तारै मेरा ओठ खोलिदिएँ। मैले ओठ खोल्ने बित्तिकै उसको जिब्रो मेरा ओठहरुको बिच हुँदै भित्र प्रबेश गर्यो। यतिबेला सम्म सिथिल भएर आराम गरिरहेको मेरो ‘पुरुष पहिचान’ फेरि चलमलाउन सुरु गर्यो। मैले उसको कम्मरमा जोडले पकडेर ओछ्यान तिर पल्टाएँ अनि म उसको माथी आएर छातिमा छाती जोडाएँ। उसले आँखा बन्द गरिदिइ। बिस्तारै मेरो जिब्रो उसका ओठहरुको बिचमा पुग्यो। उसले सानो बच्चाले स्तनपान गरेझैँ जिब्रो भित्र तानिरही। जब मेरो पुरुष पहिचानले ऊ भित्र प्रबेश गर्ने बाटो खोज्न थाल्यो तब उसका खुट्टाहरु केहि परपर फारिदैँ गए। मैले मेरो देब्रे हातको इशाराले उसलाइ प्रबेश मार्ग देखाइदिने बित्तिकै ऊ फेरि प्रबेश गर्यो त्यो स्वर्गिय मार्ग भित्र!
उसका हातका औँलाहरु मेरो ढाडमा जोडले गाडिदै गए। उसले थोरै टाउको बटारेर आफ्ना ओठहरु टोकि। मैले झनै जोड लगाउन थालेँ। उसको मुखबाट मसिनो गरि अनौठो आवाज निस्कियो। उसको आवाज सुनेर म केहि हच्किएँ। एकछिन रोकिएर बिस्तारै सोधेँ “फेरि पोल्यो हो?”
“छैन।” उसले सासले जवाफ दिइ अनि झनै जोडले मेरो ढाड अँठ्याइ। म फेरि उस्तै जोडले मच्चिइ रहेँ। उसको हातहरुले उसै गरि मलाइ अँठ्याइ रहे, अनि उसको मुखबाट उस्तै आवाज आइरह्यो लगातार। तर त्यो आवाजले मलाइ झनै कामुक बनाइ रह्यो।
केहिबेरमा दोश्रो पटक सिथिल भएपछी म ओछ्यानमा पल्टीएँ। उसले पुलुक्क मेरो अनुहारमा हेरि। अनि फेरि लजाउँदै नजर झुकाइ। मैले उसको हात तानेर पकड्दै बोलेँ “अहिले पनि पोल्यो?”
“अँहँ पोलेन!” उसले जवाफ फर्काइ।
मैले उसलाइ मेरो नजिकै ताने अनि कुममा सुताएँ। ऊ लपक्क टाँसिइ। मैले सिरानी छेउको मोबाइल ताने अनि डाटा खोलेर फेसबुक हेर्न थालेँ। उसले मेरो हातबाट मोबाइल खोसी अनि क्यामेरा खोली। अगाडिको क्यामेराले हामी दुबैलाइ कैद गर्यो। ऊ मुसुक्क मुस्कुराइ अनि खिचिक्क पारी।
“कस्तो मुख बिगार्नु भएको? हाँस्नुन के!” फेरी क्यामेरा ठड्याएर ऊ बोलि।
म अलिकती मुस्कुराइदिएँ। उसले मेरो गालामा गाला जोडाइ अनि फेरि खिचिक्क पारी।
“भयो नखिच। छि! यस्तो नाङ्गै।” मैले क्यामेरा खोसेँ। उसले केहि बोलिन। मैले मोबाइल फेरि सिरानिमा राखेँ। गलेर लखतरान भएको म निदाएँ केहिबेर।
केहिबेरमा हामी दुबैजना उठ्यौँ अनि कपडा लगायौँ। कपडा लगाइ सकेपछी ऊ आएर मेरो छातिमा टाँसिइ अनि बोलि “मलाइ कहिल्यै छोड्नु त हुन्न नि है?”
“मेरो बिश्वास लाग्दैन डल्ली?”
“लाग्छ!” उसले जोडले अंगालो हाल्दै बोलि।
“अनि किन त्यस्तो सोध्या त?”
“यसै सोध्न मन लागेर।” उसले सासले बोलि।
“ढुक्क हौ डल्ली! तिमिलाइ कहिले छोड्ने छैन। मुटु हौ तिमि मेरि। तिमिलाइ छोडेर म कसरी बाँचौँला भनत?” मैले उसलाइ छातिमा कस्दै बोलेँ। उसले केहि बोलिन। चुपचाप टाँसिइ रहि।
केहिबेरमा मैले नै उसलाइ छुटाएँ अनि हामी कोठाबाट निस्कियौँ। ऊ उसको घर तिर लागी अनि म आफ्नो।
बेलुका सबिनको बर्थडे पार्टि थीयो। म पनि पुगेको थिएँ त्यहाँ। सबैले कर गरेपछी रक्सी नपिइ भएन। म कहिलेकाहिँ मात्र पिउने मान्छे कतिखेर मातेछु पत्तै भएन। मेरो फोनको घन्टी बज्यो। मैले यताउता हेरेँ। मेरो फोन मिलनको हातमा थियो। घन्टि बजेपछी उसले मेरो फोन म तिर बढायो। मैले फोन उठाएँ। उताबाट आवाज आयो “कहाँ हुनुहुन्छ?”
“दिउँसो खिचेका फोटा डिलिट गर्नुभयो?” उसले सानो स्वरमा बोलि।
“ला बिर्सेछु पो! गरिहाल्छु है?” मैले जवाफ दिएँ।
“कस्तो बुद्दी होला। कसैले देख्यो भने! मैले नि बिर्सेछु।” ऊ डराए झैँ बोलि।
“कसैले देख्या छैन। म डिलिट गरिहाल्छु। म भरे फोन गर्छु है?” यति भनेर मैले फोन राखेँ अनि हतारहतार ग्यालेरी खोलेर दुइटै फोटा डिलिट गरिदीएँ। साथिहरु सबैले मेरो अनुहारमा ट्वाल्ल हेरिरहे चुपचाप।
धेरै मातेछु। बेलुका उसलाइ फोन गर्ने होसै भएन। बिहान आँखा खोल्ने बित्तिकै उसलाइ फोन लगाएँ। उसले धेरैबेर सम्म फोन उठाइन। मैले लगातार गरिरहेँ। धेरैबेर पछि फोन उठ्यो। उसले रुँदै बोलि “किन गर्नु भएको फोन?”
“अरे! किन गरेको रे?” म उसको अनपेक्षित ब्यबहारले छक्क परेको थिएँ।
“अनि किन गर्न पर्यो त मलाइ फोन?” ऊ झनै रुन थाली।
“हैन के भयो तिमिलाइ? हिजो फोन नगरेकोले नै यस्तो गर्या?” मैले सोधिहालेँ।
“अझै थाहा नभए जस्तो गर्न पर्दैन। छोरा मान्छेको जात न हो! मैले बिश्वास गरेर ठुलो गल्ती गरेछु।” ऊ रुँदै च्याँठ्ठिई।
मलाइ रिश उठ्न थाल्यो। मैले दिक्क मान्दै बोलेँ “हैन भएको चाहिँ के हो तिमिलाइ? त्यती ठुलो गल्ती त केहि गरे जस्तो लाग्दैन!”
“गल्ती गरेजस्तो किन लाग्थ्यो त। हिजो कसकसलाइ फोटा देखाउनु भयो भन्नु त?” उसले केहि ठुलो स्वरमा बोलि।
म आत्तिएँ। झलक्क सम्झिएँ, हिजो मिलनले मेरो फोन बोकेको थियो म मातेको बेला। मैले हडबडाउँदै बोलेँ “कसैलाइ देखाएको छैन। कसलाइ देखाउँछु त अनि त्यस्ता फोटा? लाज मर्दो!”
“नदेखाएको भए कसरी बाहिरियो त फोटो? मलाइ म्यासेज गरेको छ एउटा केटाले, फोटो सहित। ” उसले सुँकसुकाउँदै बोली।
“मलाइ साँच्चिकै थाहा भएन यार डल्लि। मैले कसैलाइ देखाएको छैन। हिजो सबिनको बर्थडेमा म मातेको थिएँ। एकपटक मिलनको हातमा मेरो फोन थियो। पक्कै उसैले हो! साले त्यस्तो छ जस्तो त लाग्दैन थियो।” मैले डराएको स्वरमा बोलेँ।
“फेक आइडिबाट म्यासेज आएको छ। अब कताकता हाल्दिने हो त्यसले! अब म त मरे पनि हुने भयो।” ऊ झनै जोडले रुन थाली।
“नरोउन डल्ली! केहि हुन्न। म मिलाउँछु सबै।” मैले उसलाइ सम्झाउन खोजेँ।
“कसरी मिलाउनु हुन्छ नि तपाइँले चाहीँ? हिजो बेलैमा डिलिट गरेको भए यस्तो हुँदै नहुने। मलाइ पनि बाठी भएर फोटो खिच्न पर्ने!” ऊ रुँदै गनगनाइ रहि।
मैले उसको फेसबुकको पासवर्ड मागेँ। उसले लगत्तै दिइ। मैले फोन काटेर उसको फेसबुक खोलेँ। म्यासेन्जरको सबैभन्दा माथी एउटा फेक आइडिबाट म्यासेज आएको थियो। खोलेर हेरेँ। लेखेको थियो “मैले जे भन्छु त्यो मानिनस भने बर्बाद गगराइदिन्छु।” म्यासेज संगै हामी दुबैको नाँगो तस्बिर थियो हिजो खिचेको। मैले धेरैबेर सोचेर म्यासेज लेखेँ “तँ मिलन होस् हैन? तैँले किन यस्तो गरेको भन् त?”
केहिबेर पछि उताबाट म्यासेज आयो “को मिलन? म चिन्दिन। मैले भनेको खुरुक्क मान्ने नत्र इन्टरनेट भरी होला तिमिहरुको फोटो।”
“के चाहिँ मान्न पर्ने हो मैले?” मैले लगत्तै प्रश्न गरेँ।
“पचास हजार पैसा पठाओ नत्र इन्टरनेट भरी हुनेछ तिमिहरुको फोटो।” केहिबेरमा नै उताबाट म्यासेज आयो।
त्यसले पैसा माग्ला भनेर मैले सोचेको पनि थिइन। उसले पचास हजार मागेपछी म हडबडाएँ। लगत्तै म्यासेज लेखेँ “को हौ तिमि? किन यस्तो गरेको? हामिले कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो पचास हजार?”
“कहाँबाट ल्याउँछौ त्यो मेरो मतलबको बिषय भएन। मलाइ पैसा चाहियो नत्र इन्टरनेट भरी हुनेछ यो फोटो।”
“तँ मिलन नै होस्! मैले चिनिसकेँ तँलाइ। तैँले बाहेक अरु कसैले मेरो फोन छोएको नै छैन। किन यस्तो गरेको तैँले?” मैले एकैपटल लामो म्यासेज पठाएँ।
“म मिलन हैन। बिश्वास नलागे जा गएर उसैलाइ सोध। मलाइ अरु कुरा थाहा छैन। आज बेलुका सम्म पैसाको बन्दवस्त गरेर मलाइ म्यासेज गर् नत्र तँलाइ थाहा नै छ के हुन्छ भनेर!” उसले धम्किपुर्ण म्यासेज पठायो।
मलाइ मिलन बाहेक अरु कसैमाथी संका थिएन। तर उसैले गर्दैछ भनेर पनि कुनै प्रमाण थिएन। मिलनलाइ फोन गरेर सोधौँ कि पनि सोचेँ। तर बिना प्रमाण मिल्ने साथीलाइ त्यस्तो आरोप लगाउन आँट आएन।
दिनभर हामी दुबै बेचैन भइ रह्यौँ। ऊ र म घन्टौँ फोनमा कुरा गरिरह्यौँ तर कुनै उपाय निस्किएन। उ आत्तिएर दिनभर जसो रोइरही। मैले उसलाइ सकेसम्म सान्तवना दिइरहेँ।
“मर्नु बाहेक केहि उपाय नहुने भयो मेरो त।” ऊ बारबार यहि भनीरही।
“म त्यस्तो हुन दिन्न। जसरी भएनी मिलाउँछु।” मैले यही उत्तर दिइरहेँ। तर, कहिँकतैबाट त्यत्रो पैसा निकाल्ने उपाय भेटिएन। साँझ पर्नै लाग्दा सम्झिएँ मेरो घाँटिमा लगाएको सिक्री, जुन एकतोलाको थियो। पोहोर मात्रै बाले किनिदिएको। अब त्यही नबेची भएन। मैले उसलाइ सिक्री बेचेर पैसा दिन्छु भनेर सुनाएँ। केहिबेर ऊ अनकनाइ।
“घरमा थाहा भयो भने मार्नु हुन्छ तपाइँलाइ।” उसले रुन्चे स्वरमा बोलि।
“हरायो भन्दिन्छु।” मैले सान्त हुँदै जवाफ दिएँ।
उसले केहि बोलिन। अरु केहि बाटो नभएपछि मौन सहमती दिइ। मैले सरासर बजार गएर सुन पसलमा सीक्री बेचिदिएँ बाउन्न हजारमा। बेलुका आएर त्यो फेक आइडिमा म्यासेज पठाएँ “पैसाको बन्दवस्त भयो। कहाँ पठाउन पर्ने हो?”
“राम बरालको नाममा आइएमइ गर्दे अनि नम्बर म्यासेज गर।” उताबाट केहिबेरमा म्यासेज आयो।
“अनि फोटा डिलिट हुन्छ नि?” मैले लगत्तै सोधेँ।
“पैसा पाएसी हुन्छ।” जवाफ आइ हाल्यो।
भोलिपल्ट बिहानको दश बजे नै मैले त्यो नाममा पचास हजार पैसा आइएमइ गर्दिएँ अनि उसलाइ नम्बर म्यासेज गर्दिएँ। म्यासेज हेरेर पनि कुनै रिप्ले आएन। मलाइ त्यो मान्छे को थियो पत्ता लगाउनु थियो। म दुइ घन्टापछि मैले पैसा पठाएको आइएमइ गएँ अनि सोधेँ “दाइ! मैले अघि पठाएको पैसा निकालेको छ कि छैन?”
“निस्की सक्यो।” आइएमइका दाइले जवाफ दिए।
“दाइ मलाइ त्यो पैसा निकालेको आइएमइको ठेगाना दिन मिल्छ?” मैले फेरि सोधेँ।
दाइले मलाइ एकपटक हेरे अनि ठेगाना निकालेर दिए। पैसा उर्लाबारिको चोककै आइएमइबाट निस्किइएको थियो। म लगत्तै बस चढेर उर्लाबारिको आइएमइमा पुगेँ। त्यहाँका दाइलाइ भनेँ “दाइ तपाइँको सिसिटिभि क्यामेराको रेकर्ड हेर्न मिल्छ?”
उनले आस्चर्यचकित नजरले मलाइ हेरेर बोले “किन र?”
“मलाइ कसैले ब्लाकमेल गरेर पचास हजार ठग्यो दाइ। यहिँबाट पैसा निकालेर लग्यो एकघन्टा अगाडी।” मैले एकै सासमा मेरो पिडा सुनाएँ।
“पुलिस केश पो गर्नपर्छ त अनि।” उसले रुखो जवाफ फर्कायो।
“पुलिस केस गर्ने खालको कुरा छैन दाइ। मिल्छ भने देखाउनुस् न। कतै अनुहार देखेर चिनिहाल्छु कि!” मैले मलिन स्वरमा आग्रह गरेँ।
आइएमइका दाइले म संग हार खाएर कम्प्युटर खोले अनि सिसि टिभी रेकर्ड देखाउन थाले। भिडियोमा एउटा मैले नचिनेको केटा आयो। पैसा लियो अनि ढोका तिर लाग्यो।
“यहि हो त्यो पैसा लग्ने मान्छे, चिनेको हो? हामिसंग नागरिकतको फोटोकपी पनि छ। पुलिस केस गर्दा भैहाल्छ त।” दाइले बोले।
मेरा आँखा अझै कम्प्युटर स्क्रीनमा नै थिए। भिडियोमा आइएमइको ढोका छेउमा कोही उभिइ रहेको देखिन्थ्यो। पैसा निकालेर गएको मान्छे पनि त्यहाँ उभियो। मैले नियालेर हेरेँ। त्यो अर्को मान्छे केटि थिइ। राम्रो संग हेर्दा मैले चिनिहालेँ त्यो अरु कोहि नभएर उहि मेरी प्रेमिका थिइ। मेरो शिरमा आकास खसेजस्तो भयो। मलाइ रिंगटा लाग्ला झैँ भयो। मुटु फुलेर बाहिर निस्केला जस्तो भयो।
“भाइ! चिन्यौ त? कि पुलिस केस गर्ने हो?” आइएमइका दाइले बोले।
“चिनिन दाइ। भयो नगर्ने अब केहि। ” मैले हडबडाउँदै यती बोलेँ अनी ‘धन्यवाद’ पनि नभनी बाहिर निस्किएर आफ्नो बाटो लागेँ।